Tencent သည် ၀ န်ထမ်း ၂၀၀၀၀ ကျော် အား ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁၆ ၆၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ အစုရှယ်ယာ များအား ဆုချ ခဲ့သည် - Pandaily
Jan 24, 2022, 13:06ညနေ 2022/01/24 14:04:40 Pandaily
Tencent Holdings Limited က သောကြာနေ့က ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်အနည္းဆံုး ဝန္ထမ္း ၂၂ ၈၀၀ ကို ဆု ေငြ ရွယ္ယာ စုစုေပါင္း ၈၀ ၀၄, ၈ ၀၇ ကို ခ်ီးျမွင့္ မည္။ ဤရွေ့ကား ပြောင်းရွှေ့ သူတို့ရဲ့ အလှူငွေ များအတွက် ဆုချီးမြှင့် ခြင်းနှင့် အုပ်စု များအတွက် အခွက် တဆ ယ် ကိုဆွဲဆောင် ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းထား ဖို့ ရည်ရွယ်သည်။
ထိုနေ့ တွင်ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း ပိတ် ချိန်တွင် Tencent ၏ စတော့ရှယ်ယာ ဈေး နှုန်းကို ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၄ ၇၄. ၈ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၀. ၉၈) ဖြင့် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအချက် အရ Tencent မှထုတ်ပေး သော အစုရှယ်ယာ အသစ်များ ၏စုစုပေါင်း တန်ဖိုးသည် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၃. ၈ ဘီလီယံ ခန့်ရှိပြီး အထက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ် များမှ ရရှိသော ရှယ်ယာ များ၏ပျမ်းမျှ တန်ဖိုးမှာ ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁၆၆ ၀၀၀ ဖြစ်သည်။
တ႐ုတ္ အင္တာနက္ ကုမၸဏီႀကီး Tencent ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ လ အနည္းငယ္ ကစၿပီး ဝန္ထမ္း ေတြကို ရွယ္ယာ ေတြ ထုတ္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် Tencent သည်လူ ၂၅ ၇၀၀ ကို စတော့ရှယ်ယာ ဆုချီးမြှင့် ခဲ့သည်။ ယခင် စတော့ စျေးနှုန်း များကို အခြေခံ၍ လူတစ် ဦး လျှင် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၈၀, ၀၀၀ တန်ဖိုးရှိ ရှယ်ယာ များ ကိုထုတ်ပေးသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် Tencent သည် ၀ န်ထမ်း ၃ ၃၀၀ ကျော် အား စတော့ရှယ်ယာ ဆု များ ပေးခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် “2021 Hurun China 500 ၏တန်ဖိုး အရှိဆုံး ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ Tencent သည်ပထမ နေရာတွင် ရပ်တည် ခဲ့ပြီးနောက် TSMC, Alibaba , Bytedance နှင့် Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. (CATL, ဦး ဆောင် ဘက်ထရီ ကုမ္ပဏီ) တို့ဖြစ်ကြသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Hurun သည်တရုတ် ၏တန်ဖိုး အရှိဆုံး ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၅၀၀ ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်
Bytedance သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် တစ်နှစ် လုံး ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၅၈ ဘီလီယံ ခန့်ရှိပြီး Y-o-Y သည် ၇၀% တိုးတက် ခဲ့သည်
TikTok ၏ မိခင် ကုမ္ပဏီ Bytedance ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တွင်စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေသည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၇၀% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ ၅၈ ဘီလီယံ သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ် ကထက် တိုးတက်မှုနှုန်း နှေးကွေး ခဲ့သည်။